Labels vs. Akwụkwọ mmado Gịnị bụ ọdịiche dị n'etiti akwụkwọ mmado na aha mmado? Akwụkwọ mmado na akara mmado na-adụkọta nkwado, nwee onyonyo ma ọ bụ ederede ọ dịkarịa ala otu akụkụ, ma nwee ike iji ihe dị iche iche mee ya. Ha abụọ nwere ọtụtụ ụdị na nha - mana enwere ọdịiche dị n’etiti ha abụọ? Nwoke ...
Ihe mkpuchi ink
Aha aha mbụ: Aha mmiri Inkjet nke mmiri mejupụtara: Akwụkwọ PP + mmiri na-adịghị ekpuchi ink Matt Matt mkpuchi Ọdịdị nke ngwaahịa a rụchara: 80um / 100um Ngwaahịa Ngwaahịa 1. Kwesịrị ekwesị maka ndị na-ebi akwụkwọ desktọọpụ, dị ka Epson global, India Technova, England Afinia, China Trojanjet, na US Ndenye Label wdg ,. 2. Econo ...
Nhazi ọkwa nke aha
Kewara n'ụdị abụọ: Akwụkwọ mpempe akwụkwọ, Filmdị ihe nkiri. 1. A na-ejikarị aha akwụkwọ ahụ eme ihe na mmiri na-asacha ngwaahịa na ngwaahịa nlekọta onwe onye a ma ama; a na-ejikarị ihe nkiri ihe nkiri eme ihe na ngwaahịa dị elu kwa ụbọchị. Ugbu a, ndị na-ewu ewu onwe-elekọta ngwaahịa na ezinụlọ mmiri mmiri saa pro ...
N'onwe Gị Okpomọkụ Nyefee Onwe nrapado Vinyl
Ngwaahịa: 1) Vinyl nke na-adụ ụcha maka ịchacha ihe na-egbuke egbuke na nke matte. 2) Mgbaze ihe nrụgide na-adịgide adịgide na-adịgide adịgide. 3) Pee-ntekwasa Silicon Wood-pulp Akwụkwọ. 4) Ihe nkiri calendared PVC. 5) Ruo afọ 1 na-adịgide adịgide. 6) Mgbagha siri ike na nguzogide ihu igwe. 7) 35 + agba ịhọrọ 8) ntụgharị ...